Somaliland: Wasiirka Madaxtooyada ka Hadlay Diiwaangalinta Cod bixiyeyaashay Gobolka Sanaag Digniina u Diray Puntland - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiirka Madaxtooyada ka Hadlay Diiwaangalinta Cod bixiyeyaashay Gobolka Sanaag Digniina u...
“ Diiwaangalinta aanu wadno cidna lagu khasbi maayo, cidii carqaladaynaysa horumarka iyo diiwaangalintaas-na ka yeeli mayno, Xukuumad ahaan waxaanu diyaar u nahay in aanu difaacno.” Wasiirka Madaxtooyada
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa shaaciyey in Xukuumadda Somaliland ay ka go’an tahay in Diiwaangalinta Cod bixiyeyaashay ay si nabad ah ugu hir galiso gobolka Sanaag.
Wasiir Maxamuud Xaashi oo maanta si wayn loogu soo dhaweeyey deegaanka Simbiraale, oo uu ku qaabilay Suldaanka guud ee beelaha Warsangali ayaa sidoo kalena shaaciyey inay ka go’an tahay Xukuumad ahaan inay difaacaan dalka Somaliland.
Wasiir Xaashi aya digniin adag u diray maamulka Soomaaliyeed ee Puntland isaga oo ugu baaqay inay joojiso caqalaha ay ka wado gobolka Sanaag. Wasiirka Madaxtooyadda iyo waftigiisa ayaa soo dhawaynta Simbiraale loogu sameeyey ka dib ka hadlay dadka deegaaankaasi waxana hadaladii Wasiirka kamid ahaa “ Suldaanka Guud ee beelaha Warsangali, Cuqaasha, odayaasha, siyaasiyiinta iyo dhamaan dadka halkan deegaanka Simbiraale sida wayn noogu soo dhaweeyey, dhamaantiin waxaanu idiinka mahad naqaynaa sida diiran ee aad noo soo dhawayseen. Waxaan si gaar ah ugu mahad naqayaa Suldaanka guud iyo cuqaasha deegaankan oo si hilow iyo kalgacal leh noo soo dhaweeyey, waxaan leeyahay waanu idinka filaynay, waynu kala leenahay, dad kala mudan ayeynu nahay, aad ayaa u mahad san tihiin.”
Mr. Maxamuud Xaashi ayaa ka hadlay ujeedada socdaalkooda waxaanu yidhi “ Waxaanu waftigayagani u soconay inaanu u kuur galno, dardargalino diiwaangalinta cod bixiyeyaasha ee ka socota gobolkan Sanaag, waa gobolkii shanaad ee diiwaangalintu ka qabsoonto Jamhuuriyadda Somaliland, waxa hadhay gobolka Sool oo kaliya. Waxa diiwaangalintan looga goleeyahay in qof walba la aqoonsado oo qof waliba uu hal cod yeesho, qof kasta oo muwaadin ahi wuxuu xaq u leeyahay inuu codeeyo, in la doorto iyo inuu wax doorto, diiwaangalintuna taas ayey salka ku haysaa.”
“ Diiwaangalintu waa cod hadlaya oo miisaan leh, waynu ka gudubnay xiligii aynu qoryahay isu guran jirnay, xiligii aynu odhan jirnay aynu reero wax ku qabsano, waxa aynu wax ka qaybsanaynaa Cod, waxa aynu ku kala cad qaadanynaa cod, waxa laysku tixgalinayaa cod, waxaan leeyahay dadka deegaankan gobolka Sanaag, gaar ahaan degmooyinkan aanu marayno si firfircoon ugu qayb qaata diiwaangalinta, maadaama oo ay faa’iidooyinkaas badan leedahay.”
Wasiirka Madaxtooyada Somaliland ayaa sidoo kalena intaasi ku daray “ Waxa kale oo aanu u soconaa in aanu xoojino nabad galyada, in aanu horumarka dhiirigalino, in aanu kormeerno oo eegno adeegyada iyo kaabayaasha bulshada maadaama oo aanu Xukuumadii nahay, bal waxa aanu mustaqbalka ku dari karno, iyo waxa aanu qaban karno, qiimaynta wixii la qabtay iyo xaalada oo dhan.”
Mudane Maxamuud Xaashi ayaa sheegay in aanay Somaliland siyaasiyan aamin sanayeyn colaada, waxaanu yidhi “ Ma wadno dagaal iyo colaad, waxa maalmahan halkan ka jiray xiisad iyo rabshado sidaa ka war qabtaan, Xukuumadda Somaliland ee Madaxweyne Siilaanyo hogaamiyo, waa Xukuumad mudakar ah, waayo arag ah, nin ruug-cadaaya ayaa hogaamiya, khasaare yaqaana waanu nahay, Colaadana waanu naqaanaa, waynu ka soo doognay diiftii colaadaha, darxumooyinkoodiina waynu xasuusan nahay, Colaadi waxba ma tarto, sidaa darteed nooma aha Siyaasad dagaal, daandaani iyo colaadi, waxa noo siyaasad ah nabad, horumar iyo in maamulka la fudiyo, Siyaasada nooguma jirto in diiwaangalintaa aanu wadno cid lagu khasbaa, cidii carqaladaynaysa Siyaasadaa, horumarkaas iyo diiwaangalinahaa aanu wadnana ka yeeli mayno. Xukuumad ahaan waxaanu diyaar u nahay in aanu difaacno dalkaga iyo dadkayaga.”
Wasiirka ayaa sidoo kale baaq u diray maamulka Puntland waxaanu yidhi“ Maamulka Puntland waa dad aanu walaalo nahay, daris nahay, dano badan ayaa iskaga keen xidhan, ganacsiga ayaa iska keen jira, dano badan ayaa isugu keen jira, waxa jira cadowyo guud oo aynu wada leenahay, waxyaabo badan ayeynu ka wada shaqaynaa, oo ay tahay inaynu ka wada shaqayno, waxa weeye Soomaaliyi haday burburtay oo ay kala tagtay waxyaabo badan oo aanay ku kala tagin ayaa jira, Soomaali-nimadu waa isir, Soomaaliyi haday kala tagtay wax ay kala leenahay way kala leedahay, waxa ay wadaagtana inay ka wada shaqyso weeye, waxaanu iyagana ugu baaqaynaa Nabad iyo wada-noolaansho, waxaanu ugu baaqaynaa in aanu is ixtiraamno, anaga waxa naga go’an qadarin iyo Ixtiraam.”